बिल ड्यूक भन्छन् कि जीन क्लाउड भान डम्मे निर्जलित भएको कारण 'शिकारी' बाट निकालिएको थियो - iHorror
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	बिल ड्यूक भन्छन् कि जीन क्लाउड भान डम्मे निर्जलित भएको कारण 'शिकारी' बाट निकालिएको थियो
बिल ड्यूक भन्छन् कि जीन क्लाउड भान डम्मे निर्जलित भएको कारण 'शिकारी' बाट निकालिएको थियो
यदि यो निर्जलित हुन्छ हामी यसलाई आगो लगाउन सक्छौं
by ट्रे हिल्बर्न III सेप्टेम्बर 12, 2021
by ट्रे हिल्बर्न III सेप्टेम्बर 12, 2021 4,165 हेराइहरू
भर्खरै इन्टरनेट एक अभिनेता एक स्टुडियो द्वारा काम गरीएको सुनेर धेरै परेशान हुन्छ। १२ घन्टाको दिन चिच्याएर भरिएको दिन हाम्रो लागि संसारमा काम नगर्ने गैर फिल्म गिग्स को लागी ठीक छ, तर कलाकारहरु जो घण्टा को एक गुच्छा काम गर्न बाध्य छन् र उनीहरुका निर्देशक द्वारा चिच्याउन को लागी सार्वजनिक दुश्मन नम्बर एक हो। ठिक छ, इन्टरनेट को बारे मा सुपर निराश र सही ढंगले जीन क्लाउड भ्यान Damme को लागी निकालिएको छ को लागी ... यो पाउनुहोस् ... निर्जलित र लगभग मरिरहेको छ।
अब सम्म, हामी मध्ये धेरै लाई थाहा छ कि जीन क्लाउड भान Damme मूल रूप बाट खेल्न जाँदै थिए predator। महान शिकारी को उनको संस्करण एक धेरै फरक नजर थियो। यो लुक धेरै कीट हुन को लागी प्रयोग गरीयो यो के भयो को लागी प्रयोग गरीयो। केविन वाकर हल अन्ततः को भूमिका मा लिनुभयो predator र भूमिका को प्रतिष्ठित बनायो।
भान डम्मले सधैं भन्यो कि फिल्म मा उनको संलग्नता दुःस्वप्न थियो। ऊ लगातार निर्जलित र सूट र अविश्वसनीय जंगल गर्मी को कारण सेट मा बिरामी थियो।
predator अभिनेता बिल ड्यूक मर्डर मास्टर संगीत संग कुरा गरे र भने कि उनको सह-कलाकार वास्तव मा निर्जलीकरण संग ठूलो समस्या मा थियो।
हामी एक लामो समय को लागी Puerto Vallarta र Palenque को जंगलहरुमा थिए। मलाई थाहा छैन यदि तपाइँलाई यो कथा थाहा छ वा छैन, तर तपाइँले देखेको शिकारी मूल शिकारी थिएन। मूल शिकारी एक धेरै सानो प्राणी थियो र उनीहरु पोस्ट उत्पादन मा आफ्नो शरीर मा विशेष प्रभावहरु राख्न जाँदै थिए। त्यसोभए उहाँसँग एक चुपचाप सूट थियो र उनीहरूले उसलाई तारमा राखे र ऊ रूखहरुमा उड्यो जस्तै उसको पीठमा तारहरु संग उडिरहेको थियो। उनी निर्जलीकरणबाट दुई पटक बाहिर निस्किसकेका थिए, र निर्माता उनीकहाँ आए र भने, 'यदि तपाइँ फेरि बाहिर जानुभयो भने, म तिमीलाई आगो लगाउने छु।' र केटाले भन्यो, 'म उद्देश्य बाट बाहिर जाँदै छैन! म निर्जलित छु! ' निर्माताले भने, 'फेरि पास आउट नगर्नुहोस्।' दुई हप्ता सम्म जान्छ, र केटा बाहिर जान्छ। निर्माता गएर उसलाई बर्खास्त गर्छन्। त्यो व्यक्ति जीन क्लाउड भान डम्मे थियो। ड्यूकले मर्डर मास्टर संगीतलाई भने।
के तपाइँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि निर्जलित भईरहेको को लागी निकालिएको हो? अविश्वसनीय।
अन्त मा यो भान Damme को लागी महान काम गरीयो। यार एक विशाल मार्शल आर्ट एक्शन स्टार बन्न गयो। त्यसोभए, म पक्का छु कि उहाँ राम्रो तरिकाले bygones चरण हुँदै हुनुहुन्छ। साथै, यदि तपाइँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि predator सूट एक थियो कि प्रयोग भएको थियो? यो सायद स्मैश हिट बन्ने थिएन कि यो भयो।
तपाइँ सूट को मूल भान Damme संस्करण को बारे मा के सोच्नुहुन्छ? हामीलाई टिप्पणी सेक्सनमा थाहा दिनुहोस्।